ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 212
သုံးဖက်မြင် အနိမ့်စံရဲ့ ကောင်းကင် ကစားပွဲ ကျော်ဟုန်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ သုံးဖက်မြင် ဖန်တည်းပေးခဲ့ပေမယ့် နေရာရွေးမှားခဲ့လေသလား (သုံးအချိုးသုံးရဲ့ ရလဒ် တစ်) မဖြစ်ခဲ့ ဝမ်းမနည်းတတ်တဲ့ (ဂရပ်ဖီတီ/ Graffiti)။ လောကသားတွေကေို ဗင့်ဆင့်ဗန်ဂိုးအကြည့်နဲ့ သာ မြင်လိုက် တချိန်မှာ တန်ဖိုးထားတတ်လာမယ် ဂရပ်ဖီတီ။ ဆန်းသစ်မှုနဲ့ ထွင်းဖောက်အမြင်ဆိုတာ ချက်ချင်းလက်ခံရိုး မရှိတတ်ကြ တယူသန်တို့ ရဲ့ နေမြဲနေလိုခြင်းကို အင်နားရှားက ရှာဖွေပြခဲ့သတဲ့ ဂရပ်ဖီတီ။ ဒါ..လောကရဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် အမြဲမှန်ကန်ခြင်းလို သစ္စာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုအမြင်ရှုပ်နေဆဲလဲ မင်းမူ မင်းဟန်အတိုင်းသာ ရှင်းပတဲ့ စေတနာနဲ့ ခင်းပြလိုက် ဂရပ်ဖီတီ။ လူတွေ… လူတွေ… မှန်ကို ကြည့်ကြတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ့်ရုပ်လွှာပျောက် (ဂရပ်ဖီတီ)ကို...
လူလေးအတွက် တေး သစ်ကောင်းအိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ နှစ်ချို့ငါးခူကြီးတွေစားရကံကြုံဖုို့ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုခ်ခြေရင်းက ရေကန်ကြီးထဲ သက်စေ့လွှတ်ခံလုိုက်ရတဲ့ ငါးတွေလုို … မြေခွေးနဲ့ပေါင်းပြီး ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်သလုို ညီညွှတ်ရေးမှာ အချစ်ရေ…. တုို့တတွေလွတ်မြောက်ကြ သစ်ငုတ်ဖြစ်မယ့်အခေါက်မှ ငရဲမှာ စုတေမိသူ နတ်သားပမာ အချစ်ရေ… တုို့တွေကုိုးကွယ်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးကျမ်းစာက ဒေဝဒတ်နဲ့ ပေါင်းမိလုို့ ဘုရားလောင်းအဖြစ်က ဈာန်လျောရ လူရောက်ပြီ လင်းတဝဲဖုို့ပဲကျန်တော့တဲ့ လကမ္ဘာ… အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်က ဂျပန်လေယာဉ်ဗုံးကြဲတာ ဘုရားရောင်ခြည်တော်လွှတ်တာနဲ့မှား ရွာဦးကျောင်းစေတီဆီ အလုအယက် ပြေးဖူးကြ အမေတုို့ရွာက ရွာသားတသုိုက်နဲ့ စခဲ့တယ်။ သစ်ကောင်းအိမ် (၁၂။ ဒီဇင်ဘာ ၈။ ၂၀၁၂) (သရုပ်ဖော်ပုံကတော့ ကိုပေါက်ဖေ့စ်ဘွတ်က သူသုံးထားတာကို ကူးလိုက်တယ်) Tags: သစ်ကောင်းအိမ် Related...
ပြည်တွင်းဖြစ် အမေ အရှင်ဥာဏိကာဘိဝံသ (ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်) ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ ကြံသကာနဲ့ ထန်းလျက် အညာထွက်ဖြစ်ပေမယ့် ထန်းလျက်ကိုမှ သူချစ် အဲဒါ အညာသား စစ်လို့တဲ့လေ။အညာချစ်တဲ့ ငါ့အမေ သြဝါဒ ချွေတတ်တာပ။ သူ့အညာ သူ့ရွာ မဖြစ်ပေမယ့် လက်ဖက်ကိုလည်း အမေချစ် တိုင်းရင်းဖြစ် စစ်စစ်မို့သား တဲ့။ငါးပိနဲ့ငါးခြောက် အောက်ပြည်ထွက် စစ်စစ် အမေ့နှစ်သက်မှုကရော ဆိုတော့ ဒါကတော့ သားရယ် မင်းတို့အဖေ ကိုရွှေငါးက အောက်သားလေကွယ်တဲ့။ ထန်းလျက်ချစ် လက်ဖက်ချစ် ငါးပိချစ်တဲ့ ငါ့အမေ အညာနေ ရိုးရိုး “စိန့်တိုင်း” ဖြစ် ပိုးပုဆိုးကျ အဆတိုးလို့ မျက်မုန်းကျိုးသပ။ ခုခေတ် ခုခါ ဟိုဟာလည်း China ဖြစ် ဒီအရာလည်း China...
အိမ်တံခါးများ ဖွင့်ထားသည် ကျော်မိုး (စကားဝါမြေ)၊ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ လာခဲ့ပါ အမေအေး မြန်မာဆိုတဲ့ရွာက မမေ့သေးပါဘူး အမေ့တေးတွေဟာ မြို့ကျေးရွာ ပျံ့ကာပ လွှမ်းဖြာကျ လှည့်မြူး ။ ထူးပါဘိ “မာမာအေး” အသံ ချိုအေးကြည်ပြန် သီဆိုဟန် လွန်ခန့်ညား သံစဉ် စာသား စည်နဲ့ဝါး အခြေခံ ဂီတရဲ့ဟန် နိုင်ငံကျော် ပြိုင်စံရှား မြန်မာပြည်ဖွား ကြိုးစားတဲ့ သူ့လိုလူ ချစ်ကြ ပြည်သူ ကြည်ဖြူစွာ ဖွင့်လျက်ထား တို့အိမ်တံခါး ။ ။ 6.12.2012(Thu) မြန်မာပြည်တွင် ကျွန်ှပ်အနှစ်သက်ဆုံးနှင့် အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော် အမေဒေါ်မာမာအေး ။ (Photo – Mar Mar Aye...
ေ မာ် ဒ န် ရှ စ် လုံးဘွဲ့ဂါထာ——————————————-င လျ င် လှု ပ် ပြီး၊ ဘု န်းကြီးမီးေ လာင်ေ ဒါသခြောင်းေ ခြာင်း၊ လ က် ပံတောင်...
ကျော်မိုး (စကားဝါမြေ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ ရွာအဝင် တမာတန်း ဘဂျမ်းက ရောက်နေပြီ။ ကဗျာတွေစီ ညီငယ်ကို စောင့်ရင်း။ တယောအို ထိုးပါလို့ အစ်ကိုဖြင့် တေးဆိုပြီ ညီငယ်ရေ လာကွဲ့။ ကဗျာဖွဲ့ တေးဆိုရင်း ဆေးလိပ်ကတို နေညိုပြီ ညီလှရဲ့ ဂီတနဲ့ ချိုးကူသံ ရောယှက်လို့ညံ လွမ်းသူ့ထံ အမှာပါး။ ညီဘွားများလာခဲ့ရင် တို့ရွာအဝင် မြင်သာတဲ့ တမာတန်း ဆီးကြိုလက်ကမ်း ဘဂျမ်းနဲ့တွေ့ပြီးလျှင် ပြုံးလျက် ပျော်ရွှင် ရွာအဝင် နှစ်ယောက်သား သွားကြစို့လား။ ပန်းချီသရုပ်ဖော် – အောင်ထက် ဆရာမောင်စွမ်းရည်၏ “တမာတန်းသို့ လွမ်းကဗျာ” ကိုဖတ်၍ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးဦးတင်မိုးအား ဤကဗျာငယ်ဖြင့်ပူဇော်ဂုဏ်ပြုပါသည်။ ဆရာမောင်စွမ်းရည်၏ တမာတန်းသို့ လွမ်းကဗျာအား မိုးမခပရိတ်သတ်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ တမာတန်းသို့...
ဇော်ထက် (ပျဉ်းမနား) ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ နွေမရယ် တကယ်ကိုလှပ လေညာအရပ်ကတမ်းချင်း ပန်းခင်းကြီးမှာလေ ပန်းမျိုးတွေကစုံလို့ ပန်းတို့က ကခုန်လို့ မွှေးရနံ့တွေလည်းသင်းထုံလို့ လိပ်ပြာတွေလည်း အရောင်စုံလို့ လိပ်ပြာတွေလည်း အတောင်စုံသမို့ ဖူးတံစို့စို့ကလည်း ရိုးတံကြဲကြဲမှာ မျှော်လင့်ဆဲ မျှော်ဆဲ……………..။ ဗြုန်းကနဲ ဆိုကာလေ အညာနွေဦးရဲ့  မြန်မာနွေဦး ဇာတ်လမ်းက ညသန်းခေါင်ယံအဆုံးမှာ လတန်ဆောင်မုန်း ရှောင်ပုံးလို့မရ မျက်နှာဖုံးအတင်းစွပ်ထားတဲ့ တော်သလင်းဖွတ်ကျားလည်း ဘီလူးရုပ်ကဘွားကနဲ ဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားခဲ့ပေါ့။ “ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်ဘူး ဘယ်သံဃာမှ လူမထင်ဘူး” အရူးပါးပါး အမူးသမားကညံ သံသေးသံကြောင် ခွေးဟောင်သံတွေနဲ့ အတွေးကြောင်ကာ ငါနိုးလာခဲ့ရ ပြန်အိပ်မရတော့ ဒေါသလျော့လည်း နှမျောရပေါ့လေ အညာနွေဦးအလှ မြန်မာနွေဦးညရဲ့  အိပ်မက်လှလှများ ပျောက်ကျသွားခဲ့ရပေါ့။ ။ No...
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ နောက်တခါ အို … ဘာတဲ့ ငါဟဲ့ … အိုဘာမား … လို နောင် နှစ်ခြောက်ဆယ်အတွင်း ငါ့ခြေရာကို ဘယ်သူမှမနင်းရဲအောင် ပြုစားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း မင်းတို့ကို သိပ်ကျေးဇူးတင်၊ နောက်တခါ လာမညည်းရဲအောင် တခါဆိုတခါ ကိုသာဆိုးတို့ရယ် ပိုးသာကုန် မောင်ပုံ ဘာဆိုဘာမှ မတတ် ငါ … ပြန်တာမှ ဘာရယ် မကြာသေး နင်တို့ … ဘီလူးစွယ်က ထွက်ပြန် သပေ့ါ၊ နောက်ကိုတော့ပြန်မဆုတ်ဘူးဆို နင်တို့လေနင်တို့ အပြောကတော့ဖြင့် ရွှေမန်းရှုံးရတယ် အဖြစ်ရယ်ပိုလို့သာဆိုး နင့်မေကလွှားရယ်နဲ့မှ ငါပြန်တာမကြာသေး ကျည်တောက်စွတ်ပြန်ပေ့ါ၊ အကြိမ်ကြိမ်ခါခါ ငါ မပြောနိုင်ဘု မင်းတို့ထိုက်မင်းတို့ကံ မင်းတို့ပြည် ငါ့ပြည်မဟုတ်...
Page 212 of 235«1...210211212213214...235»